खानपानमा ध्यान दिए क्यान्सरको जोखिम ४० % कम : चिकित्सक
काठमाडौं, माघ २१ । हामी सक्छौँ, म सक्छु भन्ने नाराका साथ बिहीबार विश्व क्यान्सर दिवस विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ नेपालमा पनि मनाईएको छ । क्यान्सर निको पार्न सकिन्छ भन्ने सचेतना जगाउन यो
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, उपाध्यक्षमा डा. कोइराला
काठमाडौँ, ८ माघ । सरकारले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको छ। जसको उपाध्यक्षमा डा. भगवान कोइरालालाई राखिएको छ। शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने गरी चिकित्सा शिक्षा
आँखा शिविरबाट २५० लाभान्वित
म्याग्दी, १९ पुस । बेनी नगरपालिका– १ रत्नेचौरमा शनिबार सम्पन्न निःशुल्क आँखा उपचार शिविरबाट २५० जना लाभान्वित भएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रत्नेचौर उपशाखाले आयोजना गरेको शिविरमा निःशुल्क आँखा परीक्षण, परामर्श,
जाडोमा बालबालिकालाई चिसोबाट जोगाउने डाक्टरका १५ सुझाव
कञ्चनपुर, कात्तिक २९ । जाडो मौसममा रुघाखोकी, निमोनिया,दम, ब्रोंकाइटिस, चिसोको एलर्जी, छालाको समस्या, कोल्ड डायरिया आदिले बालबालिकालाई एकदम छिटो असर गर्दछ ! तसर्थ निम्न कुराहरुमा ध्यान दिऔं : १. सकभर सफा तथा न्यानो
खोटाङमा सेनाको शिविरले ३१५ को साधारण उपचार
खोटाङ, कात्तिक १८ । नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको घुम्ती स्वास्थ्य शिविरबाट खोटाङका ११५ सर्वसाधारणले उपचार पाएका छन् । शेर गण मुडे ब्यारेकले दक्षिणी गाविस ओख्रे डाँडागाउँमा सञ्चालन गरेको घुम्ती स्वास्थ्य शिविरबाट विभिन्न
तीन महिना पुग्ने औषधि छ : नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ
इपब्लिक संबाददाता, काठमाण्डौँ । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले तीन महिना पुग्ने औषधि मौज्दात रहेको बताएको छ । औषधि उत्पादकहरुको छाता सङ्गठन सङ्घले आज एक विज्ञप्ति निकाली आवश्यक औषधि मौज्दात रहेको स्पष्ट